အတူမနမေီနှငျ့ အိမျထောငျမပွုမီ ဘယျလိုကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှလေုပျသငျ့သလဲ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အတူမနမေီနှငျ့ အိမျထောငျမပွုမီ ဘယျလိုကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုတှလေုပျသငျ့သလဲ?
အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီး အတူနတေယျဆိုတာ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ အရငျ့အရငျခတျေတှကေတော့ အိမျထောငျကပြွီး လကျထပျပွီးမှအတူနကွေတာဖွဈပါတယျ။ အိမိထောငျမကမြီအတူနဖေူးတဲ့အတှအေ့ကွုံမရှိကွသလို အပြျောအပါးလိုကျစားခွငျးလညျးနညျးပါးတာကွောငျ့ ကူးကျရောဂါတှဖွေဈတာနညျးပါပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ နထေိုငျမှုပုံစံတှေ၊ ခတျေတှပွေောငျးလဲလာတာနဲ့အမြှ လကျမထပျပဲအတူနတောတှမြေားလာသလို အတူနတေဲ့ကိစ်စတှေ၊ အတူနခေဲ့တဲ့သူတှေ စသဖွငျ့မြားပွားလာသလို ကူးစကျရောဂါတှလေညျးမြားပွားလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျတော့ တဈလငျတဈမယားစနဈကငျြ့သုံးတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
အိမျထောငျသညျဖွဈဖွဈ၊ လကျမထပျပဲအတူနကွေသူတှဖွေဈဖွဈ အနညျးဆုံးတော့ မိမိလကျတှဲဖျောရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုသိထားသငျ့ပါတယျ။ ကူးစကျရောဂါရှိနလေား၊ ကိုယျခံအားကောငျးလား၊ ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့တာရှိနသေလား၊ စသဖွငျ့သိရှိထားရပါမယျ။ အဲဒီလိုရှိထားရငျ အနညျးဆုံးတော့ မိမိကိုယျမိမိကာကှယျနိုငျပါတယျ။ နောကျထပျပွောရရငျ အခွားသူတှကေိုထပျမကူးအောငျလညျးကာကှယျနိုငျပါတယျ။ မိမိလကျတှဲဖျောရဲ့အခွအေနကေိုသိရှိပွီး ကုသမှုတှခေံယူနိုငျအောငျလညျး ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
အတူမနမေီအရငျဆုံးစဈဆေးထားသငျ့တာကတော့ လိငျကတဈဆငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ရောဂါတှရှေိနလေားဆိုတာ စဈသငျ့ပါတယျ။ အသညျးရောငျအသားဝါ B, C၊ခုခံအားကဆြငျးမှုရောဂါ (AIDS) စတာတှကေိုတော့ မဖွဈမနစေဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ ကူးစကျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ကုသမှုကို အကွာကွီးယူဖို့လိုအပျသလို မိမိအတှကျကောအခွားသူမြားအတှကျပါ အန်တရာယျရှိနိုငျလို့ သသေခြောခြာစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
အဆိုပါရောဂါတှအေပွငျ ကာလသားရောဂါ၊ဆီးပူညောငျးကရြောဂါစတာတှကေိုလညျး အဆငျပွရေငျစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ အဆိုပါရောဂါတှရှေိနရေငျတော့ ကုသမှုခံယူတာ၊ ကုသမှုမပွီးဆုံးခငျအတူနတေော့မယျဆိုရငျလညျး လိုအပျတဲ့အကာအကှယျအတားအဆီးတှသေုံးတာ၊စတဲ့နညျးတှနေဲ့ကာကှယျသငျ့ပါတယျ။ ဆေးစဈတယျဆိုရာမှာလညျး မိမိကော၊ အတူနအေဖျောပါစဈသငျ့ပါ
ါတယျ။ ဒါမှတဈဦးမှတဈဦးကူးစကျတာတှကေို ရှောငျရှားနိုငျမှာပါ။
အတူနတေဲ့အဆငျ့ကိုကြျောလှနျပွီးလကျထပျကွမယျ၊ ကလေးယူကွတော့မယျဆိုရငျတော့ ဒီထကျပိုမိုတဲ့စဈဆေးမှုတှပွေုလုပျရပါတယျ။
နောကျထပျ စဈထားသငျ့တာကတော့ မြိုးအောငျနိုငျမှုရှိမရှိဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသားဘကျကော၊ အမြိုးသမီးဘကျကောစဈရမှာပါ။ အတူနရေုံဆိုမလိုပမေယျ့ အိမျထောငျပွုပွီးကလေးယူမယျဆိုရငျ လိုနိုငျတဲ့စဈဆေးမှုဖွဈပါတယျ။ နှဈယောကျစလုံးမှာ ကလေးရနိုငျဖို့ လိုအပျတာတှပွေညျ့စုံရဲ့လား၊ ကိုယျဝနျဆောငျနိုငျရဲ့လားစတာတှကေို စဈဆေးထားပွီး ကလေးရနိုငျရငျတဈမြိူး၊ မရနိုငျရငျတဈမြိူး လိုအပျတွဲ့ပငျဆငျမှုတှလေုပျထားရမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ မြိုးမအောငျနိုငျရငျလညျး ကလေးရနိုငျမယျ့ အခွားနညျးလမျးတှကွေိုတငျစဉျးစားထားရပါမယျ။
နောကျထပျစဈသငျ့တာကတော့ မြိုးရိုးဗီဇစဈဆေးမှုတှဖွေဈပါတယျ။ မြိုးရိုးလိုကျတဲ့ရောရှိနသေလား၊ နှဈဖကျမိသားစုထဲမှာကောရှိနသေလား၊ ရှိနရေငျကော မိမိကလေးမှာဖွဈနိုငျလား၊ ရောဂါရဲ့ဗီဇကို အမကေနသေားကိုရောကျတာလား၊ အဖကေနသေမီးကိုရောကျတာလား၊ သားဖွဈဖွဈသမီး ဖွဈဖွဈကူးနိုငျတာလား၊ ဗီဇပါတာနဲ့ ရောဂါဖွဈပွီလားစတဲ့စတဲ့ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာအတှကျ အဖွတှေကေိုမြိုးဗီဇစဈဆေးတာ၊ တတျကြှမျးသူတှနေဲ့တိုငျပငျတာတှလေုပျသငျ့ပါတယျ။ သို့သျော စရိတျကွီးတာမို့ မတှငျကယျြသေးတဲ့နညျးဖွဈပါတယျ။
အတူမနမေီ စဈဆေးသငျ့တာတှကေိုစဈဆေးထားမှစိတျခရြမှာဖွဈပါတယျ။ လကျထပျတော့မယျ၊ ကလေးယူတော့မယျဆိုရငျလညျး ထပျမံစဈဆေးရမှာတှရှေိပါတယျ။ လိုအပျတဲ့စဈဆေးမှုတှလေုပျထားမှသာ ထိထိရောကျရောကျကာကှယျကုသမှုတှပွေုလုပျနိုငျပွီး သာယာတဲ့ဘဝတှကေိုတညျဆောကျနိုငျမှာပါ။
အတူမနေမီနှင့် အိမ်ထောင်မပြုမီ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သင့်သလဲ?
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး အတူနေတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင့်အရင်ခေတ်တွေကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး လက်ထပ်ပြီးမှအတူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမိထောင်မကျမီအတူနေဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိကြသလို အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းလည်းနည်းပါးတာကြောင့် ကူးက်ရောဂါတွေဖြစ်တာနည်းပါပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊ ခေတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ လက်မထပ်ပဲအတူနေတာတွေများလာသလို အတူနေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အတူနေခဲ့တဲ့သူတွေ စသဖြင့်များပြားလာသလို ကူးစက်ရောဂါတွေလည်းများပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်မထပ်ပဲအတူနေကြသူတွေဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတော့ မိမိလက်တွဲဖော်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသိထားသင့်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါရှိနေလား၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့တာရှိနေသလား၊ စသဖြင့်သိရှိထားရပါမယ်။ အဲဒီလိုရှိထားရင် အနည်းဆုံးတော့ မိမိကိုယ်မိမိကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောရရင် အခြားသူတွေကိုထပ်မကူးအောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိလက်တွဲဖော်ရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိပြီး ကုသမှုတွေခံယူနိုင်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အတူမနေမီအရင်ဆုံးစစ်ဆေးထားသင့်တာကတော့ လိင်ကတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေရှိနေလားဆိုတာ စစ်သင့်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ B, C၊ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (AIDS) စတာတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကူးစက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကုသမှုကို အကြာကြီးယူဖို့လိုအပ်သလို မိမိအတွက်ကောအခြားသူများအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ သေသေချာချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါရောဂါတွေအပြင် ကာလသားရောဂါ၊ဆီးပူညောင်းကျရောဂါစတာတွေကိုလည်း အဆင်ပြေရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါရောဂါတွေရှိနေရင်တော့ ကုသမှုခံယူတာ၊ ကုသမှုမပြီးဆုံးခင်အတူနေတော့မယ်ဆိုရင်လည်း လိုအပ်တဲ့အကာအကွယ်အတားအဆီးတွေသုံးတာ၊စတဲ့နည်းတွေနဲ့ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။ ဆေးစစ်တယ်ဆိုရာမှာလည်း မိမိကော၊ အတူနေအဖော်ပါစစ်သင့်ပါ
ါတယ်။ ဒါမှတစ်ဦးမှတစ်ဦးကူးစက်တာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။
အတူနေတဲ့အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးလက်ထပ်ကြမယ်၊ ကလေးယူကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပိုမိုတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရပါတယ်။
နောက်ထပ် စစ်ထားသင့်တာကတော့ မျိုးအောင်နိုင်မှုရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဘက်ကော၊ အမျိုးသမီးဘက်ကောစစ်ရမှာပါ။ အတူနေရုံဆိုမလိုပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုပြီးကလေးယူမယ်ဆိုရင် လိုနိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ကလေးရနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေပြည့်စုံရဲ့လား၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရဲ့လားစတာတွေကို စစ်ဆေးထားပြီး ကလေးရနိုင်ရင်တစ်မျိူး၊ မရနိုင်ရင်တစ်မျိူး လိုအပ်တြဲ့ပင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မျိုးမအောင်နိုင်ရင်လည်း ကလေးရနိုင်မယ့် အခြားနည်းလမ်းတွေကြိုတင်စဉ်းစားထားရပါမယ်။
နောက်ထပ်စစ်သင့်တာကတော့ မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောရှိနေသလား၊ နှစ်ဖက်မိသားစုထဲမှာကောရှိနေသလား၊ ရှိနေရင်ကော မိမိကလေးမှာဖြစ်နိုင်လား၊ ရောဂါရဲ့ဗီဇကို အမေကနေသားကိုရောက်တာလား၊ အဖေကနေသမီးကိုရောက်တာလား၊ သားဖြစ်ဖြစ်သမီး ဖြစ်ဖြစ်ကူးနိုင်တာလား၊ ဗီဇပါတာနဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီလားစတဲ့စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာအတွက် အဖြေတွေကိုမျိုးဗီဇစစ်ဆေးတာ၊ တတ်ကျွမ်းသူတွေနဲ့တိုင်ပင်တာတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။ သို့သော် စရိတ်ကြီးတာမို့ မတွင်ကျယ်သေးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အတူမနေမီ စစ်ဆေးသင့်တာတွေကိုစစ်ဆေးထားမှစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထပ်တော့မယ်၊ ကလေးယူတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ထပ်မံစစ်ဆေးရမှာတွေရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ထားမှသာ ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ကုသမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပြီး သာယာတဲ့ဘဝတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
Lifestyles for early pregnancy